Gastroenteritis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Gastroenteritis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း)
Gastroenteritis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း) ကဘာလဲ။
အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းခြင်းဟာ ရောဂါပိုးဝင်ရောက်မှုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အူနံရံတွေ ရောင်ရမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူအချို့က အစာအိမ်နာတယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် အမှန်က အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်း ခြင်း လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါပိုး အများစုဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေဖြစ်ပြီး အချို့ကတော့ဘက်တီးရီးယား (သို့) ကပ်ပါးကောင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ညစ်ညမ်းတဲ့ အစားအစာနဲ့ရေတွေ၊ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့လူက တစ်ဆင့် ကူးစက်ဝင်ရောက်တတ်ပါတယ်။ အူရောင်ခြင်းကြောင့် အဓိက ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာက ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျို့အန်ခြင်းနဲ့ ဝမ်းလျှောခြင်းတွေ ဖြစ်တဲ့အခါမှာ ရေဓါတ်အများကြီး ဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်။
Gastroenteritis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ သူဟာ ကလေးတွေ၊ အသက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ ကိုယ်ခံအားမကောင်းတဲ့လူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ခြင်းကတော့ လက်ဆေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင် ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Gastroenteritis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်း ခြင်း ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
• တုန်ခြင်း (သို့) ခေါင်းကိုက်ခြင်း
ဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီး ဒီလက္ခဏာတွေဟာ ရောဂါပိုးဝင်ရောက်ပြီး ၁ရက်ကနေ ၃ ရက်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ၁ရက် ကနေ ၂ ရက်လောက် ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ ၁၀ ရက်အထိလည်း ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာမပါဝင်တဲ့ အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါ လက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
• ၂၄ နာရီအတွင်း ဝမ်းဆက်တိုက်သွားခြင်း (သို့) ဝမ်းတွင်း သွေးပါခြင်း
• ၂ ရက်ထက်ပိုပြီး အန်ခြင်း (သို့) သွေးအန်ခြင်း
• ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်း (ရေငတ်ခြင်း၊ ပါးစပ်ခြောက်ခြင်း၊ အဝါရင့်ရောင် ဆီးသွားခြင်း၊ ဆီးသွားနည်းခြင်း)
• အဖျားတက်ခြင်း (၄၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်(သို့) ၁၀၄ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)
မွေးကင်းစနဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက်ကတော့ အောက်ပါ လက္ခဏာတွေရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
• အဖျားတက်ခြင်း (၃၈.၉ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (သို့) ၁၀၂ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်)
• ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်း လက္ခဏာများ
• နာရီပေါင်းများစွာ ကြာအောင် အန်ခြင်း
• ၆ နာရီအတွင်း သေးခံ လဲရန် မလိုခြင်း
• ပုံမှန် မဟုတ်သော အိပ်ခြင်း
Gastroenteritis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်း ခြင်း ဟာ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ကပ်ပါးရောဂါပိုးတွေကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ သူ့ကို ညစ်ညမ်းတဲ့အစားအစာ၊ ရေနဲ့ ရောဂါရှိတဲ့သူနဲ့ ထိတွေ့မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတွေအတွက် အဖြစ်အများဆုံး အူရောင်ရောဂါပိုးကတော့ novovirus နဲ့ rotavirus ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့အဖြစ်နည်းတဲ့ အခြေအနေတွေမှာတော့ အူရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးဟာ Ecoli နဲ့ salmonella တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ညစ်ညမ်းပြီး မချက်ရသေးတဲ့ အသားနဲ့ ကြက်ဥတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Gastroenteritis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်း ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
• အသက် – အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာ ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းတတ်ပြီး ရောဂါပိုးပိုမို ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ မွေးကင်းစတွေမှာလည်းကိုယ်ခံအား နည်းတတ်ပါတယ်။
• ကိုယ်ခံအားနည်းခြင်း – HIV သို့ ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသခြင်းလိုမျိုး အခြေအနေတွေဟာ ကိုယ်ခံအားနည်းစေပါတယ်။
• ရေညစ်ညမ်းခြင်း – သင်နေတဲ့နေရာမှာ ရေညစ်ညမ်းရင် အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်း ခြင်း ရောဂါ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှု အားနည်းခြင်း – လက်သေချာမဆေးရင် ရောဂါပိုး ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Gastroenteritis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
• ရောဂါရာဇဝင်မေးခြင်းနဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း
• ဝမ်း နမူနာ ယူပြီး ဘက်တီးရီးယား (သို့) ကပ်ပါးကောင်ကို စစ်ဆေးခြင်း
Gastroenteritis (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းခြင်းကို ကုသမှုဟာ အနားယူမှုနဲ့ ရေဓါတ်ဖြည့်တင်းဖို့က အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ
တွေကို သက်သာစေမယ့် ဆေးတွေကို ဆရာဝန်က ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘက်တီးရီးယား ရောဂါပိုးဆိုရင်တော့ ပိုးသတ်ဆေးသောက် နိုင်ပါတယ်။
အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်း နေတယ်လို့ သံသယရှိတယ်ဆိုရင်
• အစာစားခြင်းကို ခဏရပ်ပြီး အစာအိမ်ကို အနားပေးပါ။
• အရည်များများ သောက်ပါ။
• အစာကြေလွယ်တဲ့အ စာတွေကိုစားပါ။
• နို့၊ အရက်၊ ကော်ဖီ၊ အမာစာတွေနဲ့ အဆီများတဲ့ အစာတွေကိုရှောင်ပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် အူရောင်ခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်
• ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပါ။
• လက်မကြာခဏဆေးပါ။ အထူးသဖြင့် အိမ်သာတက်ပြီးတိုင်း လက်ဆေးပါ။
• အစာကြေလွယ်တဲ့ ပျော့ပြောင်းတဲ့အစာတွေကို စားပါ။
• အစားအသောက်ကိုင်တွယ်စဉ်မှာ သင့်လျော်တဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ နည်းလမ်းကိုသုံးပါ။
Gastroenteritis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/viral- gastroenteritis/basics/definition/con-20019350. Accessed Jul 14 2016
Gastroenteritis. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000252.htm. Accessed Jul 14 2016Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012 Print version. Page 293
Gastroenteriti http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/viral- gastroenteritis/basics/definition/con-20019350. Accessed Jul 14 2016
Gastroenteritis. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000252.html. Accessed Jul 14 2016Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012 Print version. Page 293
Gastroenteritis. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000252.html. Accessed Jul 14 2016